पृथ्वी राजमार्ग अबरुद्ध
तनहुँ, भदौ ८ । पृथ्वी राजमार्ग अर्न्तगत तनहुँको बन्दिपुर-८, याम्पफाटमा बिहीबार साँझ खसेको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अबरुद्ध भएको छ। पहिरोसँगै विजुलीको पोल समेत राजमार्गमै
राप्रपा नेपालका सभासद् एक दिनका लागि निलम्बित
काठमाडौं, भाद्र ८। संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्न सरकारले गरेको प्रस्तावको विरोधमा संसद्भित्र नाराबाजीमा उत्रिएका चार सभासद्लाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले एक दिनका लागि निलम्बन गरेका छन्
आठ हजार लडाकुको समायोजनको प्रस्ताव माओवादीले
काठमाडौ, भाद्र ८| माओवादीले आठ हजार लडाकुको समायोजनको प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली सेना मातहत छुट्टै महानिर्देशनलाय बनाएर लडाकु समायोजनको निर्णय माओवादीले गरेको छ ।
पोखरा, भाद्र ८| पोखरामा बिहीबार बिहान एक महिलाको हत्या भएको छ । प्रहरीका अनुसार पोखराको प्रतिभा टोलकी लक्ष्मी परियारको हत्या भएको जनाएको छ । ४०
नेपालमा राजनीतिक अपराधिकरणमा बृद्धि ः ओएचसिएचआर प्रमुख
विराटनगर, भदौ ८। नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसिएचआर प्रमुख ज्योति साङ्घेराले नेपालमा राजनीतिक अपराधिकरणमा बृद्धि भएको कार ण दण्डहिनताले प्रश्रय पाइरहेको बताउनुभएको छ । विराटनगरमा
एक आरोपीको लागि ७५ वकिल !
राजविराज, भदौ ८ । एक जना अभियुक्तका लागि कति जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्छन् होला । साधारणतया बढीमा पाँचदेखि १० जना तर एकजना अभियुक्त ९आरोपी० को
धनगढी, भदौ ८ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कैलालीको मसुरिया बजारस्थित कन्काई होटलको कोठामा गएराति हत्या गरिएको अवस्थामा एक युवतीको शव फेला परेको छ ।अन्दाजी २२ वर्षीया
दोलखा, । हिड्दा ५ घण्टा लाग्छ, तर गाडिको यात्रामा १० घण्टामा पनि पुग्ने हो कि होइन टुङ्गो छैन । यो गति माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको
मेरुदण्ड पक्षघातबाट पीडित एक युवा परिवारबाट अपहेलित
मेरुदण्ड पक्षघातबाट पीडित एक युवा परिवारबाट अपहेलित भएका छन् । खनालथोक ४, घट्टेटारका २३ वर्षे प्रविण अधिकारी मेरुदण्डमा पक्षघात भई अपाङ्ग भएपछि परिवारबाट अपहेलित भएका हुन्
पत्रकार वुढाथोकी आक्रमणका मुख्य योजनाकार पक्राउ
संखुवासभा भदौ ८ । संखुवासभाका पत्रकार किशोर बुढाथोकीलाई खुकुरी प्रहार गरी फरार रहे का मुख्य अभियुक्त बिकाश राईलाई प्रहरीले गएराती पक्राउ गरेको छ ।
कैलालीको मसुरियामा प्रेमिकाको हत्या
कैलाली भदौ ८ । कैलालीको मसुरीयास्थित कन्काई होटलमा आज बिहान एक युवतीको शव फेला परेको छ ।एक युवकस“ग वुधवार सा“झ होटलमा बास बस्न आएकी ती युवतीको
पौडेललाई बहुमत दिलाउन काग्रेस नेताहरु अन्य दलसंगको छलफलमा
काठमाडौं, भदौ ८ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु आप्mना उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई बहुमत दिलाउन अन्य दलका शीर्ष नेताहरुसंगको भेटघाटलाई तीव्रता दिन थालेका छन् । रामचन्द्र पौडेललाई बहुमतीय
फेसबुक जस्तै �नमस्तेमित्र� चलाउने कि ?
फेसबुक जस्तै “नमस्तेमित्र” चलाउने कि ? फेसबुकको लोकप्रियतालाई पछ्याउदै त्यसका सुबिधाहरु सबै उपलब्ध हुने गरी नेपाली अनलाइन सामाजिक संजाल शुरु भएको छ ।
बहुमतिय प्रणालीमा पनि सहमति खोज्न सकिने निष्कर्ष
काठमाडौँ, भदौ ७ । नेकपा एमालेले सहमतिको सरकार बन्ने स्थिति नरहेपनि बहुमतिय प्रणालीमा पनि सहमति खोज्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरवारस्थित संसदिय दलको कार्यालयमा
महाकाली नदीले एकै गाउँको ८० रोपनी कटान
डडेल्धुरा, भदौ ७ । महाकाली नदीले जोगबुढाको तातापानी गाउँ पसेर ८० रोपनी कटान गरेको छ। महाकालीको बहाव अझै नघटेका कारण कटान रोकिएको छैन। महाकालीले गाउँ पसेको
११ जिल्लाका सुरक्षाप्रमुख तिब्बततिर
बाग्लुङ, भदौ ७- गृह सहसचिवको नेतृत्वमा सीमावर्ती ११ जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी मंगलबार चीन स्वशासित तिब्बतको साताव्यापी 'अध्ययन भ्रमण' मा निस्किएका छन्। चीन सरकारको निमन्त्रणमा २९ सदस्यीय
कङ्ग्रेसले ५ हजार दिएपछि ५ बालबालिकाको सामूहिक दाहसंस्कार
रुकुम, भदौ ७ । पहिरोबाट पुरिएर मृत्यु भएका ५ जना बालबालिकाको सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस रुकुमले ५ हजार रुपियाँ किरिया खर्च दिएपछि बुधबार उनीहरुको
बाँकेको खजुरामा तनाब, प्रहरी द्धारा अश्रुग्याँस प्रहार
नेपालगञ्ज भदौ ७ । भारतिय नम्बरप्लेटको ट्रकको ठक्करवाट नेपालगञ्जमा खजुराकी एक महिलाको ज्यान गएपछि बाँकेको खजुरा क्षेत्र आज तनावग्रस्त बनेको छ । खजुराका नागरिकले बिहानैबाट नेपालगञ्ज
दाजुले काटे आफ्नै भाईको लिंग
पर्वत, भदौ ७। रक्सिको उन्मादमा आफ्नै दाजुले भाइको लिङ्ग काटिदिएपछि उनी गम्भीर घाइते भएका छन्। पर्वत जिल्लाको कुर्घा गाविस ५ का ३६ वर्षीय बुद्धिबहादुर नेपालीले आफ्ना
हजारेको समर्थन काठमाडौँमा पनि
काठमाडौँ, भदौ ७- भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अन्ना हजारेको समर्थनमा आज काठमाडौँमा ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गरियो। महात्मा गान्धी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र
सरकारद्धारा विभिन्न उद्योगमा नियुक्ति
काठमाडौँ, भदौ ७ । नेपाल सरकारले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सातवटा उद्योग तथा समितिमा रिक्त रहेका सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र कार्यकारी निर्देशक पदमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्त
विदेशी सट्टेबाजले भाउ बढाए पछि विश्वभर नै सुनको मूल्य चुलिँदै
काठमाडौँ, भदौ ६ । अमेरिका,युरोपको आर्थिक समस्यालाई अगाडि राखेर विदेशी सट्टेबाजले भाउ बढाए पछि विश्वभर नै सुनको मूल्य बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि
जाजरकोटमा चरम खाद्य संकट
जाजरकोट, भदौ ६ । जाजरकोटका खाद्यान्न अभाव भएका एक दर्जनभन्दा बढी गाविसमा अझै चामल पुगेको छैन । सम्बन्धित निकायको लापरबाहीले चामल पुर्याउन ढिलाइ भएपछि ती गाविसमा
दमको रोगीलाई क्षयरोगको औषधि खुवाउँदा मृत्यु।
चितवन , भदौ ६ । चिकित्सकको लापरवाहीले चितवनमा एक बिरामीको अकालमा ज्यान गएको छ । दमकी बिरामी भरतपुर-४ कमलनगरकी ५७ वर्षीय पूर्णकली ढकाललाई चितवन मेडिकल कलेजका
संसदमा चुनाव हुने, भदौ १४ अघि नयाँ प्रम पाइने
काठमाडौं, भदौ ६| सहमति सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भइहाले भने पनि व्यवस्थापिका-संसदमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन रोक्न असम्भव देखिएको छ। संसदमा रहेका
जिल्ला न्यायाधीशको ताल
नुवाकोट भदौ ६| जिल्ला अदालत नुवाकोटमा चार महिनापछि न्यायाधीश आएका छन् । गएको वैशाख ६ गतेदेखि न्यायाधीशविहीन बनेको जिल्ला अदालतमा सोमबार पद्‌मराज भट्ट न्यायाधिशका रुपमा हाजिर
Date : 22 Aug 2011
देउवालाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सबै दलहरुसंग थप छलफल गर्ने काग्रेसको निर्णय
काठमाण्डौ भदौ ५ । नेपाली कांग्रेसले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि उपलब्ध समयसीमाभित्र आफ्नो ने तृत्वको सरकार बनाउन अधिकतम पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति
राप्रपा नेपालद्वारा शान्ति र संविधान सुनिश्चित नभएको भन्दै आजको संसदको बैठक बहिष्कार
काठमाण्डौ भदौ ५ । संवैधानिक समिति पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समिति शक्तिशाली भएको छ। केही छिन अघि संशोधित नियमावलीमा सरकारले सिफारिश गरेको व्यक्तिका विपक्षमा
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र तमलोपा अध्यक्षवीच भेट
काठमाण्डौ भदौ ५ । एकीकृत नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरवीच समसामयिक बिषयमा छलफल भएको छ
Pages 132 : You are at page 122 of 132